TCDD, ogeysiisyada TCDD, Shaqooyinka TCDD, qorista TCDD, Tijaabooyinka TCDD, Natiijooyinka hindisada TCDD, Warbxinta TCDD ee hadda, Qorista TCDD, Codsiyada TCDD
The Republic of Turkey Tareennada State (TCDD) ayaa ka jawaabay eedeymaha ku jira war qoraal ah oo ku saabsan web site ay kartoo. Bayaanka, “Waajibaadka adeegga dadweynaha ee TCDD Tasimacilik AS wuxuu dhammaan doonaa dhammaadka sannadkan. [More ...]
TCDD waxay shaqaaleysiin doontaa Kaaliyaha Kormeeraha; 4 Caawiyeyaal kormeerayaal ayaa loo qori doonaa in loo qoondeeyo guddiga kormeerka ee Agaasinka Guud ee TCDD. Imtixaanka gelitaanka ayaa hoos lagu sharxay. Taariikhda Imtixaanka iyo Waqtiga: Qorahay [More ...]
Mushaharka Hurdada TCDD: Waxaan raadinay tareenka gobolka iyo qiimayaasha adiga kuu ah. Tareenka buluuga ah ee 'mzmir Blue Train', oo ay ka mid yihiin safarka sariirta, baaldiyo iyo qiimaha cufnaanta daboolan rakaab kasta iyo qiimaha sariirta, [More ...]
TCDD 2019/2 Kulankii GCC ayaa la qabtay
Agaasinka Guud ee TCDD, kuxigeenka Maareeyaha Guud İsmail Çağlar ee Maamulka Maamulka (GCC) ee kulanka Sarkaalka Guud ee Gawaarida Gawaarida Ganacsi ee Saray-Sen ayaa la falanqeeyey. Gudiga ka shaqeeya maandooriyaha Sarkaalka Gaadiidka-Sen [More ...]
Maareeyaha Guud ee TCDD wuxuu ka qeybgalay kulanka ku habboon ee UIC-RAME; Ururka Tareenka Caalamiga ah (UIC) Gudiga Gobolka Bariga Dhexe (RAME). Kulankan ayaa lagu qabtay magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Guddoomiyaha TCDD iyo Maareeyaha Guud Cali [More ...]